Maareeyaha faylka; waxa ay tahay, hawlaha iyo beddelka - VidaBytes | LifeBytes
Mid kasta oo ka mid ah Nidaamyada hawlgalka ee maanta jira, waxay ku shaqeeyaan nidaam faylal horay loo sii qeexay kaas oo lagu maareeyo waxyaabaha kala duwan ee kaydinta. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee ay Android leedahay ayaa ah in ay leedahay dabacsanaan weyn marka ay timaado daalacashada galka kaydinta. Kaliya waa inaad ku xidhid qalabkaaga moobilka fiilada USB iyo kan PC-ga. Sidan ayaad labadaba u habayn kartaa oo aad u wareejin kartaa faylasha aad u baahan tahay.
Boostada aad hadda ku jirto, waxaan ka hadli doonaa mowduuca ah waa maxay maamulaha faylka iyo kuwee ugu fiican. Waxaan diirada saari doonaa inta badan wax walba oo la xiriira aaladaha Android. Inta badan aaladaha mobilada ama kiniiniyada, maamulaha faylka ayaa inta badan lagu daraa heerka caadiga ah, xumaanta tani waa in qaar badan oo iyaga ka mid ah ay yihiin kuwo aasaasi ah oo ka wanaagsan ayaa loo baahan yahay.
Si loo helo waxqabadka ugu wanaagsan nidaamyadan maaraynta faylalka, isticmaalayaasha iyaga haysta ayaa ahaan doona loo oggol yahay inuu kaydiyo, wax ka beddelo, tirtiro ama koobiyo dhammaan faylasha la doonayo, iyo sidoo kale in ay awoodaan in ay helaan iyaga oo aan wax dhibaato ah.
1 Waa maxay maamulaha faylka?
2 Muxuu qaban karaa maareeyaha faylka isku dhafan?
3 Khasaaraha maareeyaha faylka caadiga ah
4 Maamulayaasha faylka ugu fiican
4.1 Maareeyaha faylka Astro
4.3 Abka Maareeyaha Faylka
4.4 Baadhis adag
4.5 Taliyaha guud
Waa maxay maamulaha faylka?
Maamulayaasha faylka ee Android iyo noocyada kale ee aaladaha mobilada labaduba waa isku mid shaqada, qaabeynta faylalka kala duwan iyo sidoo kale kuu ogolaanaya inaad u maamusho faylasha hab aad u fudud in aan ku hayno kaydkeena.
Kumbuyuutarrada, maamulaha noocaan ah ayaa horey loogu daray, laakiin tani kuma dhacayso qaar ka mid ah aaladaha mobilada, tablet-yada, iwm. Maamulaha faylka had iyo jeer kuma yimaado si caadi ah.
Haddii fursad ahaan, qalabkaagu ku yimaado a Nidaamka faylka la sii daayay, waxaad yeelan doontaa suurtogalnimada inaad si dhakhso ah u beddesho waana adigoo soo dejinaya oo dabadeed ku rakibaya codsi ujeedadan.
Muxuu qaban karaa maareeyaha faylka isku dhafan?
Lahaanshaha maamulaha faylka qarsoon ee aaladdaada Android gudaha app settings waxay soo jeedinaysaa in shirkadu rabto inay ka hortagto isticmaaleyaashan inay la xiriiraan nidaamka faylka. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee tallaabadan horseeday waa amniga, tan iyo isbedelada qaab dhismeedka faylalka kaydsan ayaa sababi kara in hawlaha qaarkood ay joojiyaan shaqada.
Haddii aad rabto inaad ka hesho qalabkaaga, waa inaad gelisaa ikhtiyaarka dejinta, raadi oo dooro "Memory iyo USB", ka dibna gal "Xusuusta Gudaha" oo ugu dambeyntii guji "Explore". Marka aad leedahay fur sahamiyaha, waxaad awoodi doontaa inaad fiiriso dhammaan faylalka ku kaydsan gudaha xusuusta gudaha ee qalabkaaga.
Waxaad fursad u heli doontaa inaad bedesho aragtida shabkada, kala soocida magaca, taariikhda ama cabbirka oo waxaad xitaa samayn kartaa raadinta markaad bilowdo hawsha maamulaha. Si aad u gasho waxa ku jira galka, kaliya waa inaad gujisaa mid ka mid ah.
Sida aan ku soo sheegnay qaybta hore, iyada oo ay ugu wacan tahay hawlaha kala duwan ee tafatirka ee maamulaha faylka, waxaad awoodi doontaa inaad doorato faylasha, tirtirto, koobiyayso meel kasta ama aad la wadaagto codsiyada kale.
Khasaaraha maareeyaha faylka caadiga ah
Liiska soo socda, waxaad ka heli doontaa taxane ah dhibco taban oo qaar badan oo maareeyayaasha faylalka wadaagaan iyo in ay lagama maarmaan noqon doonto in la hagaajiyo si ay u abaabulaan iyo hanuuninta isticmaalaha.
Maareeyayaasha faylka caadiga ah ma laha shaqo gooyn, si aad u awooddo inaad ka guurto faylka hal gal una guurto mid kale, shaqada kaliya ee suurtogalka ah waa in la koobiyeeyo. Marka aanu samaynayno hawsha koobiga, waxa aanu samaynayna waa in aanu nuqul ka samayno fayl gaar ah anagoo laba jeer ku jira, hal mar gal galkii asalka ahaa, kaas oo ay tahay in aanu tirtirno, iyo mid kale oo ku jira galka la doortay.
Qodobka labaad ee daciifka ah ee aan helno waa taas ma beddeli kartid galka ama faylasha, Magacyada buuxa iyo kuwa asalka ah mar walba waa la muujiyaa, laakiin ma oggola in wax laga beddelo si loo kala saaro.
Marar badan, galka cusub looma samayn karo abaabul wanaagsan faylalka kaydsan, waxaad isticmaali kartaa oo keliya faylalka hore loo abuuray.
Ugu dambeyntii, ogow haddii ay lahaan lahayd nidaam lagu kaydiyo faylasha lagu shubo daruuraha, ha ahaadeen Dropbox, Drive iyo kuwa kaleba, maaraynta faylashaas iyo kuwa xusuusta gudaha ee qalabka waxay noqon lahayd horumar weyn.
Maamulayaasha faylka ugu fiican
Si loo habeeyo nidaamka faylkayaga, waxaan kugula talineynaa inaad hesho beddelka maamulaha caadiga ah, kaas oo, sidaan ku soo aragnay qaybta hore, waxay soo bandhigi kartaa cillado taxane ah. Qaybtan, waxaan ku soo bandhigaynaa a xulashada kooban ee qaar ka mid ah maareeyayaasha faylalka loogu taliyo.
Maareeyaha faylka Astro
Mid ka mid ah codsiyada ugu caansan ee isticmaala dhexdooda, kuwaas oo leh Awood u leh in uu abaabulo dhammaan faylasha labadaba xusuusta gudaha iyo kaarka SD iyo daruuraha. Waa bilaash, sidoo kale waa mid aad u fudud in la isticmaalo oo leh hawlo kala duwan oo kala duwan.
Maareeyaha faylka Google, oo leh interface aad u fudud. Waxay kuu ogolaan doontaa, maamul waxa ku kaydsan qalabkaaga, laakiin ma ogaan doontid meesha saxda ah ee faylalka. Waxa kale oo aad bannaanayn kartaa booska adiga oo tirtiraya faylasha iyo codsiyada, maamuli kara faylasha oo la wadaaga qalabka kale.
Abka Maareeyaha Faylka
Sida magaceeda ka muuqata, codsigan Waxay haysataa dhammaan hawlaha diyaarsan si ay u maareeyaan u kaydsan sida ugu fiican. Gebi ahaanba bilaash ah oo qalab awood leh oo aad ku maamuli karto faylashaada lagu shubay daruuraha.
A classic dhabta ah ee mobilada Android, kaas oo muddo ka dib horumarinayey hawlihiisa iyo naqshadayntiisa. Waad ku mahadsan tahay hawlahan aan ka hadalnay. waxaad fursad u haysataa inaad abuurto galal ama galal cusub. Intaa waxaa dheer oo dhan waxaas oo dhan iyo awood u leh inay maareeyaan, waxaad heli kartaa faylasha ku kaydsan daruuraha.
Kaliya maahan inaan helno nooca desktop-ka, laakiin sidoo kale waxay leedahay codsi loogu talagalay isticmaaleyaasha Android. Mawduuca qalabka lagu maamulo faylasha, waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican. Waxay ku leedahay maareynta faylka laba daaqadood, xulashooyin badan, dib u magacaabid ikhtiyaari, Bookmarks, iyo wax ka badan.
Qalabkan maaraynta, kaliya ma hagaajin doontid habaynta faylalkaaga, laakiin waxaad yeelan doontaa koontarool badan oo ku saabsan halka mid kasta oo iyaga ka mid ahi ku yaalliin si aad si dhakhso ah u aqoonsan karto marka xigta.
Had iyo jeer waxaan kuu sheegnaa kuwan soo socda oo maanta ma ay yaraan doonin, haddii aad u maleyneyso inaad ogtahay maamulaha faylka gaarka ah oo aad isku dayday oo ay ku siisay natiijooyin wanaagsan, ha ka waaban inaad ku dhaafto aagga faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Aplicaciones » Maareeyaha faylka; waa maxay, hawlaha iyo beddelka